သွေးတိုးသမားများ ရုတ်တရက် လေမဖြတ်ရန် သတိထားရမည့် အရေးကြီး အချက်များ… – MyanmarUpdates
သွေးတိုးသမားများ ရုတ်တရက် လေမဖြတ်ရန် သတိထားရမည့် အရေးကြီး အချက်များ…
စာရေးသူ၏ ဆေးခန်းသို့ လျှာလေးပြီး စကားမပီသူခပ်ဝဝ အမျိုးသမီး လူနာတစ်ဦး ရောက်လာပါသည်။သူသည် အသက် (၅၀) ကျော်ရှိပြီ။ သူဘာဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသူ့ဖာသာ မပြောနိုင်။ နံဘေးမှ ပါလာသူ မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြောပြရပါသည်။ နံနက်စောစော (၃) နာရီခန့်ကအပေါ့ထသွားရင်း ခေါင်းထဲမှမူးပြီး လဲကျမလို ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆောင်းတွင်းဖြစ်၍ အေးနေသော အချိန်လည်း ဖြစ်သည်။အိမ်သားများသိ၍ အချိန်မီအိပ်ယာပေါ်သို့ တွဲခေါ်ကြသည်။လဲမကျပါ။ သို့သော် သူမ စကားပြောသောအခါ လျှာလိပ်ပြီး စကားမပီတော့ကြောင်း ပြောပါသည်။ နံနက်လင်းချိန်တွင်ဆေးခန်းတစ်ခုတွင် သွေးပေါင်ချိန် ကြည့်သောအခါသွေးတိုးတက်နေကြောင်း ပြောပါသည်။ အပေါ်သွေး ၁၈၀(မီလီမီတာ/ပြဒါး) အောက်သွေး ၁၂၀ (မီလီမီတာ/ပြဒါး)ရှိနေသဖြင့် သွေးတိုးကျဆေး ထိုးပေးလိုက်သည်ဟု ပြောပါသည်။
သွေးတိုးရောဂါသည် အငန်စားမှသာ တိုးသည်မဟုတ်။အအေးပတ်လျှင်လည်း တိုးတတ်ပါသည်။ ရေချိုးမှား၍၊လေတိုက်ထဲတွင် အိပ်မိ၍၊ ပန်ကာလေ၊ အဲယားကွန်း အအေးလွန်ကဲခြင်းတို့ကြောင့် သွေးကြောများ အအေးပတ်၍ကျုံ့ပြီး သွေးပေါင်တက်လာ တတ်ပါသည်။
လျှာလေး (လျှာလေဖြတ်) သွားသူ အမျိုးသမီးကြီး၏ရာဇဝင်ကို မေးမြန်းကြည့်သောအခါ အသက် ၄၀ ကျော်မှစပြီး လူဝလာပြီး သွေးတိုးဝင်လာသည်။ သွေးကျဆေးကို စွဲမစားပါ။ခေါင်းမူးသည့်အခါ စားသည်။ ပိုပြီးဝလာမှာ စိုးသဖြင့်အဆီများရှောင်သည်။ ဝက်သား၊ အမဲသား ခြေလေးချောင်းရှောင်သည်။ အချိုရှောင်သည်။ သွေးချို၊ ဆီးချိုဝင်မည် စိုးသဖြင့်အစပ်နှင့် အခါးကိုသာ များများစားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဖြစ်မယ့်ညက ညစာ ဘာစားမိသလဲဟု မေးသောအခါပုံမှန်ထမင်းဟင်းပဲ စားသည်ဟု ပြောသည်။ ဘာဟင်းနှင့်စားလဲမေးသောအခါ ကြက်သားဟင်း၊ အသီးအရွက်ကြော်အနည်းငယ်စားသည်ဟု ပြောသည်။ သင့်သောအစာများပင်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားဘာများ စားမိသေးလဲ မေးမှကြက်ဟင်းခါးသီးကြော်လည်း ပါသည်ဟု ပြောပါသည်။
သွေးတိုးရှိသူ အတော်များများသည် အငန်ရှောင်ရမည်။ဆားရှောင်ရမည်ကို သိကြပါသည်။ သို့သော် အရေးကြီးသောအခြားရှောင်ရန် ရှိသေးသည်ကို မသိကြပါ။ ထိုအရာမှာ လေစာဖြစ်ပါသည်။ လေစာကြောင့် သွေးတိုးလျှင် အငန်စားမိ၍ သွေးတိုးသည်ထက်ပို၍ ဆိုးတတ်ပါသည်။အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးပညာ၏ အလိုအရ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသွေးများ စီးဆင်းနေခြင်းမှာ လေတွန်းအားကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဝါယောဓါတ်၏ တွန်းကန်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ လေစာ (ဝါယောစာ)စားသောအခါ နဂိုသွေးတိုး အခံရှိသူများမှာ လေတွန်းအားကြောင့်ပို၍ သွေးတက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ဆောင့်တက်ခဲ့လျှင်ဦးနှောက်ထဲမှ သွေးကြောပေါက်သည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုအမျိုးသမီးကြီး၏ ညစာတွင် ပါဝင်သော ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာ အခါးအရသာရှိသော လေစာဖြစ်သည်။ ခွေးတောက်ရွက်၊တမာရွက်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ ကြောင်လျှာသီး၊ ကင်းပုံသီးစသည်တို့မှာ ခါးသော အရသာရှိသော လေစာများ ဖြစ်သည်။လေတိုးပွားပြီး တွန်းကန်စေသဖြင့် လေတိုး (သွေးတိုး)စေသော အစာများဖြစ်သည်ကို သတိပကြစေချင်သည်။မူလ သွေးတိုးအခံ ရှိသူသည် သွေးကျဆေးလည်း ပုံမှန် မသောက်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးကဲ့သို့ လေစာစားမိသောအခါ သွေးပေါင်တက်လာသည်။ညအိပ်နေစဉ်က ဘာမှမဖြစ်သေး။ အပေါ့အပါးသွားရန်အပြင်ထွက်သောအခါ အအေးပတ်ပြီး သွေးကြောများကျုံ့နေသဖြင့် သွေးပေါင်ချိန် ပိုတက်လာသည်။
သွေးပေါင်တက်ခြင်းသည် နှလုံးမှသွေးကိုပို၍ညှစ်ပို့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ညှစ်အားကြောင့် ဦးနှောက်အတွင်းမှ သွေးကြောငယ်လေးများ ပေါက်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့မှာလည်းညှစ်အားကြောင့် သွေးကြောနံရံမှအဆီခဲ၊ သွေးခဲတို့ ပတ်မျောပါသွားပြီး ဦးနှောက်အတွင်းပိုင်းတွင်သွားရောက် ပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းကြောင့် လေဖြတ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ကြက်ဟင်းခါးသီးကို ကြိုက်လွန်းလို့ ငယ်ငယ်လေးထဲကစားလာတာ၊ အခုမှဘာကြောင့် လာပြီး လေဖြတ်ရသလဲဟုမေးစရာ ရှိပါသည်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သွေးကြောများ၏အနေအထားမှာ ယခုအသက် ၅၀ ကျော် အနေအထားနှင့် မတူပါ။ပလပ်စတစ် ပိုက်များကို ကြည့်ပါ။ ဝယ်ယူသုံးစွဲခါစက အသစ်ဖြစ်၍ ပျော့ပြောင်းသည်။ ရေတွန်းအားကို ခံနိုင်သည်။သို့သော် နှစ်ကြာလာသောအခါ ထိုပလပ်စတစ်ပိုက်များသည် မာကြောလာသည်။ ကြွတ်ဆတ်လာသည်။ ရေယိုပြီးစိမ့်သည့်နေရာများ ရှိလာသည်။ ရေဖိအားပြင်းထန်လျှင် ပိုက်ကွဲသွားနိုင်သည်။
ဤသဘောပင်။ နှလုံးသွေးကြောနှင့် သွေးလှည့်အဖွဲ့၏သဘောမှာ အသက်ကြီးလာလျှင် ဒဏ်မခံနိုင်တော့ပါ။အအေးပတ်မှ မဟုတ်။ အပူလွန်ကဲလျှင်၊ ပင်ပန်းလျှင်၊စိတ်တိုဒေါသထွက်လျှင် ရုတ်တရက် လဲကျသွားနိုင်သည်။လေဖြတ်သွားနိုင်သည်။ လေဖြတ်သူ၊ လဲကျသူမှန်သမျှ ကိုလေ့လာဆန်းစစ် ကြည့်သောအခါ ထိုသို့မဖြစ်မီ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းက သူတို့သည် လေစာတစ်မျိုးမျိုးကို စားထားခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
သွေးတိုး၍ လေဖြတ်ခြင်းများတွင် ခန္ဓာကိုယ်၏ ဘယ်ခြမ်းလေဖြတ်ခြင်း၊ ညာခြမ်း လေဖြတ်ခြင်း၊ ပါးရွဲ့လေဖြတ်ခြင်းများရှိသကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အကောင်းပကတိ လှုပ်ရှားနိုင်သော်လည်းစကားမပီ၊ မပြောနိုင်တော့သည့် လျှာလေဖြတ်ခြင်းလည်း ရှိပါသည်။
ဖြစ်ခဲသော်လည်း အများအပြား တွေ့ရဖူးပါသည်။ဘယ်သန်သူများ ဘယ်ခြမ်း လေဖြတ်လျှင် စကားမပီ၊ လျှာပါရွဲ့စောင်းပြီးလေဖြတ်လေ့ ရှိပါသည်။ မသန်သည့် အခြမ်းကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးခြင်း၊ တိုင်းရင်းဆေး အကြောပြင် ပညာတို့နှင့်ပြုပြင်ကုသပေးခြင်းတို့နှင့် ပြန်၍ ကောင်းနိုင်သော်လည်းလျှာကိုအကြောပြင်၍ မရပါ။ လျှာပွတ်ဆေးကို အားကိုးရပါသည်။အနောက်တိုင်းဆေးတွင် လျှာပွတ်ဆေးမရှိပါ။ တိုင်းရင်းဆေးကဤနေရာတွင် အားသာချက်ရှိသည်။
နန်းတွင်းလျှာပွတ်ဆေးသည် မြန်မာဘုရင် လက်ထက်ကနန်းသုံးဆေးဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းဆေး အမှတ် (၃၂) ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းဆေးတွင် အဆိပ်ပင်များဖြစ်သောဆီမီးတောက်ဥ၊ ကိုယ်ရံကြီးဥ၊ ပဒိုင်းမြစ်၊ မျှားဆိပ်စသောအစွမ်းထက်သည့် ဆေးအမယ်များ ပါဝင်သည်။အဆိပ်ပင်လော၊ ဆေးပင်လော အဆိပ်သည် ဆရာ့လက်ရောက်လျှင်ဆေးဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်လေသည်။ အခြားဆရာကိုင် လေဖြတ်လျှာပွတ်ဆေးများလည်း ရှိသည်။ လျှာရွဲ့ခြင်း၊ လျှာတိုခြင်း၊စကားမပီခြင်း၊ သွားရည်မထိန်းနိုင်ခြင်းများကို ရှေးမြန်မာတိုင်းရင်းဆေး ဆရာကြီးများက နိုင်နင်းပိုင်နိုင်စွာ ကုသနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
လေစာများ အကြောင်းကို ဆက်လက်တင်ပြရလျှင် . . .
“အခါးဟူသမျှ လေဓါတ်ကြွ၊မူလပျက်စီးရာ ခွေးတောက်တမာ၊
မတွဲဖက်၊ တစ်ချက်မှတ်ကြပါ”ဟူသော လင်္ကာနှင့်အညီ လေစာကို တစ်နေ့တည်း နှစ်မျိုးစားမိခြင်း၊ တစ်ကြိမ်တည်း နှစ်မျိုးရောစားမိခြင်းတို့ကြောင့် လေဖြတ်နိုင်သည်ကိုတင်ပြလိုပါသည်။ ဝက်သားသည် လေစာဖြစ်သည်။ သွေးတိုးနိုင်သည်။
ဝက်သား စားသည့်နေ့တွင် ကြက်ဟင်းခါးသီး ချက်မစားရ။ခွေးတောက်ရွက်ဟင်းချို မသောက်ရ။ ကြောင်လျှာသီးချက်မစားရ။လက်ဖက် (အခါးမညှစ်ပဲ) မစားရ။ တမာရွက်မစားရပါ။ စားမိလျှင်တစ်နေ့တည်း လေစာနှစ်မျိုး ထပ်မိပြီး သွေးတိုး (လေတိုး) တက်ပြီးလေဖြတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူများသည် အခါးစားမီလျှင် ဆီးချိုသက်သာမည်ထင်ပြီး တစ်နေ့တည်း အခါးနှစ်မျိုးစားမိလျှင် သွေးတိုးပြီးလေဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ဆီးချိုထိန်းဆေးများကို ကျွမ်းကျင်သည့် ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသာ စားသင့်သည်။ အခါး စားလွန်းလျှင် လေစာဖြစ်ပြီး သွေးတိုးရောဂါပါ ထပ်တိုးလာနိုင်ပါသည်။နရသုခိကျမ်းတွင် “ယားယံခြင်းကား လေကင်းမှတ်ရာ” ဟုမိန့်ဆိုချက်ရှိသဖြင့် ယားနာရောဂါ၊ အရေပြား ရောဂါရှိသူများလည်းလေစာ၊ အခါးဓါတ်များ မစားသင့်ပါ။
အရသာခါးလျှင် လျှော့စား၊ ရှောင်စားသင့်ပါသည်။သွေးယားရောဂါ Alergic ရှိသူများလည်းလေစာစားလျှင် ရောဂါပြန်ထလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ဖုန်၊ ကြက်မွှေး၊ ငှက်မွှေး၊ စူးရှသောအနံ့၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်အနံ့များကြောင့်Alergic ထသည်ကို သိကြသော်လည်း လေစာကြောင့်သွေးယားရောဂါ ထသည်ကို သိသူနည်းသဖြင့် တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူအားလုံး လေစာကိုသတိထားစားရန်၊ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်စားရန်၊ လျှော့စားရန်နှင့်အထူး သတိပြုရန်မှာ
တစ်နေ့တည်း၊ တစ်ကြိမ်တည်းမှာ လေစာနှစ်မျိုးဆင့်၍ မစားမိကြရန်သတိပြုကြဖို့ အသိပေး ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
စာရေးသူ၏ ဆေးခနျးသို့ လြှာလေးပွီး စကားမပီသူခပျဝဝ အမြိုးသမီး လူနာတဈဦး ရောကျလာပါသညျ။သူသညျ အသကျ (၅၀) ကြျောရှိပွီ။ သူဘာဖွဈခဲ့သညျကိုသူ့ဖာသာ မပွောနိုငျ။ နံဘေးမှ ပါလာသူ မိသားစုဝငျတဈဦးက ပွောပွရပါသညျ။ နံနကျစောစော (၃) နာရီခနျ့ကအပေါ့ထသှားရငျး ခေါငျးထဲမှမူးပွီး လဲကမြလို ဖွဈခဲ့သညျ။
ဆောငျးတှငျးဖွဈ၍ အေးနသေော အခြိနျလညျး ဖွဈသညျ။အိမျသားမြားသိ၍ အခြိနျမီအိပျယာပျေါသို့ တှဲချေါကွသညျ။လဲမကပြါ။ သို့သျော သူမ စကားပွောသောအခါ လြှာလိပျပွီး စကားမပီတော့ကွောငျး ပွောပါသညျ။ နံနကျလငျးခြိနျတှငျဆေးခနျးတဈခုတှငျ သှေးပေါငျခြိနျ ကွညျ့သောအခါသှေးတိုးတကျနကွေောငျး ပွောပါသညျ။ အပျေါသှေး ၁၈၀(မီလီမီတာ/ပွဒါး) အောကျသှေး ၁၂၀ (မီလီမီတာ/ပွဒါး)ရှိနသေဖွငျ့ သှေးတိုးကဆြေး ထိုးပေးလိုကျသညျဟု ပွောပါသညျ။
သှေးတိုးရောဂါသညျ အငနျစားမှသာ တိုးသညျမဟုတျ။အအေးပတျလြှငျလညျး တိုးတတျပါသညျ။ ရခြေိုးမှား၍၊လတေိုကျထဲတှငျ အိပျမိ၍၊ ပနျကာလေ၊ အဲယားကှနျး အအေးလှနျကဲခွငျးတို့ကွောငျ့ သှေးကွောမြား အအေးပတျ၍ကြုံ့ပွီး သှေးပေါငျတကျလာ တတျပါသညျ။
လြှာလေး (လြှာလဖွေတျ) သှားသူ အမြိုးသမီးကွီး၏ရာဇဝငျကို မေးမွနျးကွညျ့သောအခါ အသကျ ၄၀ ကြျောမှစပွီး လူဝလာပွီး သှေးတိုးဝငျလာသညျ။ သှေးကဆြေးကို စှဲမစားပါ။ခေါငျးမူးသညျ့အခါ စားသညျ။ ပိုပွီးဝလာမှာ စိုးသဖွငျ့အဆီမြားရှောငျသညျ။ ဝကျသား၊ အမဲသား ခွလေေးခြောငျးရှောငျသညျ။ အခြိုရှောငျသညျ။ သှေးခြို၊ ဆီးခြိုဝငျမညျ စိုးသဖွငျ့အစပျနှငျ့ အခါးကိုသာ မြားမြားစားသညျဟု ဆိုပါသညျ။
ဖွဈမယျ့ညက ညစာ ဘာစားမိသလဲဟု မေးသောအခါပုံမှနျထမငျးဟငျးပဲ စားသညျဟု ပွောသညျ။ ဘာဟငျးနှငျ့စားလဲမေးသောအခါ ကွကျသားဟငျး၊ အသီးအရှကျကွျောအနညျးငယျစားသညျဟု ပွောသညျ။ သငျ့သောအစာမြားပငျဖွဈပါသညျ။ အခွားဘာမြား စားမိသေးလဲ မေးမှကွကျဟငျးခါးသီးကွျောလညျး ပါသညျဟု ပွောပါသညျ။
သှေးတိုးရှိသူ အတျောမြားမြားသညျ အငနျရှောငျရမညျ။ဆားရှောငျရမညျကို သိကွပါသညျ။ သို့သျော အရေးကွီးသောအခွားရှောငျရနျ ရှိသေးသညျကို မသိကွပါ။ ထိုအရာမှာ လစောဖွဈပါသညျ။ လစောကွောငျ့ သှေးတိုးလြှငျ အငနျစားမိ၍ သှေးတိုးသညျထကျပို၍ ဆိုးတတျပါသညျ။အာယုဗ်ဗဒေ ဆေးပညာ၏ အလိုအရ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးသှေးမြား စီးဆငျးနခွေငျးမှာ လတှေနျးအားကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
ဝါယောဓါတျ၏ တှနျးကနျမှုကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ လစော (ဝါယောစာ)စားသောအခါ နဂိုသှေးတိုး အခံရှိသူမြားမှာ လတှေနျးအားကွောငျ့ပို၍ သှေးတကျလာခွငျးဖွဈပွီး ဆောငျ့တကျခဲ့လြှငျဦးနှောကျထဲမှ သှေးကွောပေါကျသညျအထိ ဖွဈနိုငျသညျ။
ထိုအမြိုးသမီးကွီး၏ ညစာတှငျ ပါဝငျသော ကွကျဟငျးခါးသီးမှာ အခါးအရသာရှိသော လစောဖွဈသညျ။ ခှေးတောကျရှကျ၊တမာရှကျ၊ ကွကျဟငျးခါးသီး၊ ကွောငျလြှာသီး၊ ကငျးပုံသီးစသညျတို့မှာ ခါးသော အရသာရှိသော လစောမြား ဖွဈသညျ။လတေိုးပှားပွီး တှနျးကနျစသေဖွငျ့ လတေိုး (သှေးတိုး)စသေော အစာမြားဖွဈသညျကို သတိပကွစခေငျြသညျ။မူလ သှေးတိုးအခံ ရှိသူသညျ သှေးကဆြေးလညျး ပုံမှနျ မသောကျ၊ ကွကျဟငျးခါးသီးကဲ့သို့ လစောစားမိသောအခါ သှေးပေါငျတကျလာသညျ။ညအိပျနစေဉျက ဘာမှမဖွဈသေး။ အပေါ့အပါးသှားရနျအပွငျထှကျသောအခါ အအေးပတျပွီး သှေးကွောမြားကြုံ့နသေဖွငျ့ သှေးပေါငျခြိနျ ပိုတကျလာသညျ။
သှေးပေါငျတကျခွငျးသညျ နှလုံးမှသှေးကိုပို၍ညှဈပို့သောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ညှဈအားကွောငျ့ ဦးနှောကျအတှငျးမှ သှေးကွောငယျလေးမြား ပေါကျထှကျသှားခွငျးဖွဈသညျ။ အခြို့မှာလညျးညှဈအားကွောငျ့ သှေးကွောနံရံမှအဆီခဲ၊ သှေးခဲတို့ ပတျမြောပါသှားပွီး ဦးနှောကျအတှငျးပိုငျးတှငျသှားရောကျ ပိတျဆို့လိုကျခွငျးကွောငျ့ လဖွေတျရခွငျး ဖွဈသညျ။
ကွကျဟငျးခါးသီးကို ကွိုကျလှနျးလို့ ငယျငယျလေးထဲကစားလာတာ၊ အခုမှဘာကွောငျ့ လာပွီး လဖွေတျရသလဲဟုမေးစရာ ရှိပါသညျ။ ငယျငယျတုနျးက သှေးကွောမြား၏အနအေထားမှာ ယခုအသကျ ၅၀ ကြျော အနအေထားနှငျ့ မတူပါ။ပလပျစတဈ ပိုကျမြားကို ကွညျ့ပါ။ ဝယျယူသုံးစှဲခါစက အသဈဖွဈ၍ ပြော့ပွောငျးသညျ။ ရတှေနျးအားကို ခံနိုငျသညျ။သို့သျော နှဈကွာလာသောအခါ ထိုပလပျစတဈပိုကျမြားသညျ မာကွောလာသညျ။ ကွှတျဆတျလာသညျ။ ရယေိုပွီးစိမျ့သညျ့နရောမြား ရှိလာသညျ။ ရဖေိအားပွငျးထနျလြှငျ ပိုကျကှဲသှားနိုငျသညျ။
ဤသဘောပငျ။ နှလုံးသှေးကွောနှငျ့ သှေးလှညျ့အဖှဲ့၏သဘောမှာ အသကျကွီးလာလြှငျ ဒဏျမခံနိုငျတော့ပါ။အအေးပတျမှ မဟုတျ။ အပူလှနျကဲလြှငျ၊ ပငျပနျးလြှငျ၊စိတျတိုဒေါသထှကျလြှငျ ရုတျတရကျ လဲကသြှားနိုငျသညျ။လဖွေတျသှားနိုငျသညျ။ လဖွေတျသူ၊ လဲကသြူမှနျသမြှ ကိုလလေ့ာဆနျးစဈ ကွညျ့သောအခါ ထိုသို့မဖွဈမီ နာရီအနညျးငယျအတှငျးက သူတို့သညျ လစောတဈမြိုးမြိုးကို စားထားခဲ့ကွကွောငျးတှရှေိ့ရပါသညျ။
သှေးတိုး၍ လဖွေတျခွငျးမြားတှငျ ခန်ဓာကိုယျ၏ ဘယျခွမျးလဖွေတျခွငျး၊ ညာခွမျး လဖွေတျခွငျး၊ ပါးရှဲ့လဖွေတျခွငျးမြားရှိသကဲ့သို့ ခန်ဓာကိုယျမှာ အကောငျးပကတိ လှုပျရှားနိုငျသျောလညျးစကားမပီ၊ မပွောနိုငျတော့သညျ့ လြှာလဖွေတျခွငျးလညျး ရှိပါသညျ။
ဖွဈခဲသျောလညျး အမြားအပွား တှရေ့ဖူးပါသညျ။ဘယျသနျသူမြား ဘယျခွမျး လဖွေတျလြှငျ စကားမပီ၊ လြှာပါရှဲ့စောငျးပွီးလဖွေတျလေ့ ရှိပါသညျ။ မသနျသညျ့ အခွမျးကို လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပေးခွငျး၊ တိုငျးရငျးဆေး အကွောပွငျ ပညာတို့နှငျ့ပွုပွငျကုသပေးခွငျးတို့နှငျ့ ပွနျ၍ ကောငျးနိုငျသျောလညျးလြှာကိုအကွောပွငျ၍ မရပါ။ လြှာပှတျဆေးကို အားကိုးရပါသညျ။အနောကျတိုငျးဆေးတှငျ လြှာပှတျဆေးမရှိပါ။ တိုငျးရငျးဆေးကဤနရောတှငျ အားသာခကျြရှိသညျ။
နနျးတှငျးလြှာပှတျဆေးသညျ မွနျမာဘုရငျ လကျထကျကနနျးသုံးဆေးဖွဈပွီး တိုငျးရငျးဆေး အမှတျ (၃၂) ဟုသတျမှတျထားသညျ။ ၎င်းငျးဆေးတှငျ အဆိပျပငျမြားဖွဈသောဆီမီးတောကျဥ၊ ကိုယျရံကွီးဥ၊ ပဒိုငျးမွဈ၊ မြှားဆိပျစသောအစှမျးထကျသညျ့ ဆေးအမယျမြား ပါဝငျသညျ။အဆိပျပငျလော၊ ဆေးပငျလော အဆိပျသညျ ဆရာ့လကျရောကျလြှငျဆေးဖွဈသညျဟု ဆိုနိုငျလသေညျ။ အခွားဆရာကိုငျ လဖွေတျလြှာပှတျဆေးမြားလညျး ရှိသညျ။ လြှာရှဲ့ခွငျး၊ လြှာတိုခွငျး၊စကားမပီခွငျး၊ သှားရညျမထိနျးနိုငျခွငျးမြားကို ရှေးမွနျမာတိုငျးရငျးဆေး ဆရာကွီးမြားက နိုငျနငျးပိုငျနိုငျစှာ ကုသနိုငျခဲ့ကွပါသညျ။
လစောမြား အကွောငျးကို ဆကျလကျတငျပွရလြှငျ . . .
“အခါးဟူသမြှ လဓေါတျကွှ၊မူလပကျြစီးရာ ခှေးတောကျတမာ၊
မတှဲဖကျ၊ တဈခကျြမှတျကွပါ”ဟူသော လင်ျကာနှငျ့အညီ လစောကို တဈနတေ့ညျး နှဈမြိုးစားမိခွငျး၊ တဈကွိမျတညျး နှဈမြိုးရောစားမိခွငျးတို့ကွောငျ့ လဖွေတျနိုငျသညျကိုတငျပွလိုပါသညျ။ ဝကျသားသညျ လစောဖွဈသညျ။ သှေးတိုးနိုငျသညျ။
ဝကျသား စားသညျ့နတှေ့ငျ ကွကျဟငျးခါးသီး ခကျြမစားရ။ခှေးတောကျရှကျဟငျးခြို မသောကျရ။ ကွောငျလြှာသီးခကျြမစားရ။လကျဖကျ (အခါးမညှဈပဲ) မစားရ။ တမာရှကျမစားရပါ။ စားမိလြှငျတဈနတေ့ညျး လစောနှဈမြိုး ထပျမိပွီး သှေးတိုး (လတေိုး) တကျပွီးလဖွေတျခွငျး၊ ဦးနှောကျ သှေးကွောပွတျခွငျး ဖွဈနိုငျပါသညျ။
ဆီးခြိုရောဂါ ရှိသူမြားသညျ အခါးစားမီလြှငျ ဆီးခြိုသကျသာမညျထငျပွီး တဈနတေ့ညျး အခါးနှဈမြိုးစားမိလြှငျ သှေးတိုးပွီးလဖွေတျနိုငျပါသညျ။ ဆီးခြိုထိနျးဆေးမြားကို ကြှမျးကငျြသညျ့ ဆရာဝနျ၏ ညှနျကွားခကျြအတိုငျးသာ စားသငျ့သညျ။ အခါး စားလှနျးလြှငျ လစောဖွဈပွီး သှေးတိုးရောဂါပါ ထပျတိုးလာနိုငျပါသညျ။နရသုခိကမျြးတှငျ “ယားယံခွငျးကား လကေငျးမှတျရာ” ဟုမိနျ့ဆိုခကျြရှိသဖွငျ့ ယားနာရောဂါ၊ အရပွေား ရောဂါရှိသူမြားလညျးလစော၊ အခါးဓါတျမြား မစားသငျ့ပါ။
အရသာခါးလြှငျ လြှော့စား၊ ရှောငျစားသငျ့ပါသညျ။သှေးယားရောဂါ Alergic ရှိသူမြားလညျးလစောစားလြှငျ ရောဂါပွနျထလရှေိ့ကွောငျး တှရေ့ပါသညျ။ဖုနျ၊ ကွကျမှေး၊ ငှကျမှေး၊ စူးရှသောအနံ့၊ ဓါတျဆီ၊ ဒီဇယျအနံ့မြားကွောငျ့Alergic ထသညျကို သိကွသျောလညျး လစောကွောငျ့သှေးယားရောဂါ ထသညျကို သိသူနညျးသဖွငျ့ တငျပွရခွငျး ဖွဈပါသညျ။
သှေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးခြိုရောဂါ ရှိသူအားလုံး လစောကိုသတိထားစားရနျ၊ တတျနိုငျသမြှ ရှောငျစားရနျ၊ လြှော့စားရနျနှငျ့အထူး သတိပွုရနျမှာ
တဈနတေ့ညျး၊ တဈကွိမျတညျးမှာ လစောနှဈမြိုးဆငျ့၍ မစားမိကွရနျသတိပွုကွဖို့ အသိပေး ရေးသားလိုကျရပါသညျ။
Originally posted 2018-11-02 11:39:51.